RW Rooble oo Awaamiir adag dul-dhigay Wasaaradda Maaliyadda - Bulsho News
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa awaamiir adag dul dhigay Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda kuwaasoo oo la xiriira hanaanka kharash bixinta.
Rooble ayaa amar ku bixiyay in aan wax kharash ah laga bixin karin lacagta Hey’adda IMF ee qoondada Dowladda Federaalka ee loo yaqaan SDRs, iyadoo aan ogolaansho laga helin Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Waxaa kale oo uu amar ku bixiyay in mushaharaadka ciidamada iyo shaqaalaha, saadka, mashaariicda iyo wixii kale ee kharash lagama maar-maanka ah ay marka mas’uuliyiinta wasaaradda maaliyadda waajibaadkooda shaqo gutaan ay ogolaansho ka helaan Ra’iisul Wasaaraha, inta aan la bixin wax lacag ah.
Hoos ka akhriso qoraalka kasoo baxay RW oo dhameystiran.
by 46 mins ago 46 mins ago
by 47 mins ago 47 mins ago
by 48 mins ago 48 mins ago
Ikraan Tahliil: Afar guddi oo arrimo saameyn lahaa...
Booqashada Madaxweynayaashii hore ee degmada Cadale, Hirshabelle
Cismaan Cali Khan: Wuxuu ahaa ninkii ugu taajirsanaa...
Shacab si yaab leh uga fal-celiyey qoraalkii Farmaajo...